Qalabka sawir qaadista ee xirfadeed: qalabkee ayaan u baahanahay? | Abuurista khadka tooska ah
Dib-u-soo-celinta laga bilaabo Freepik.es
In qofku naftiisa u huro adduunka sawir qaadista heer xirfadeed wuxuu u baahan yahay qaabab taxane ah oo aan u baahanahay inaan tixgelino si aan ugu horumarino waxqabadkeena xorriyadda ugu weyn ee suurtogalka ah.
Halkan waxaa ah hage yar oo aad waxtar u yeelan kara marka aan qaadno tillaabooyinkeenna ugu horreeya. Qaybaha isdaba jooga ah waxaan ku dhex mari doonaa inta kale ee canaasiirta ee ka tirsan qalab sawir xirfadeed.
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan waana run in tayada kamaradaha is haysta ay sii kordhayaan, marka mabda 'ahaan mid ka mid ah ayaa qiimo noo yeelan kara, laakiin haddii waxa aan raadineyno ay tahay inaan sameyno sawir xirfad leh iyo heer ganacsi, waa inaan helnaa dareen celin kamarad. Waxay kuxirantahay nooca isticmaalaha aad tahay, Haddii aad jeceshahay sawir qaadista oo aad rajeyneyso inaad naftaada u hurto si joogto ah, dhab ah oo qoto dheer, waa ikhtiyaarka ugu fiican. Haddii, liddi ku ah, aad u fiirsato adduunka sawir ahaan hiwaayad ahaan ujeeddadiisuna tahay inaad sawirro ka qaaddo munaasabadaha gaarka ah, adigoon intaa ku sii dhaafin, waa inaad doorataa kamarad istiraatiijiyad kooban. Waxay kuxirantahay waxaad rabto inaad hesho.
Haddii aad doorato fal-celin xirfad-yaqaan ama nus-xirfadle ah, Way fiicantahay inaad tixgeliso waxyaabaha soo socda:
Diiradda gacanta: Inta badan jawaab celiyayaashu waxay leeyihiin ikhtiyaarkan. Markaan diirada saareyno waxaan ku sameyn karnaa qaab otomatik ah, laakiin anigu kugula talin maayo. Markaan dooneyno inaan qaadno shaashad aad u weyn, diirada ayaa door aad u muhiim ah leh oo markaan gacanta ku qabanno waxaan ku sameyn karnaa qaab aad u badan oo sax ah, waxaan xakameynaa cabirrada waqti kasta waana tan marwalba la mahadiyo. Qaabka otomaatiga ah ayaa laga yaabaa inuu faa'iido leeyahay, laakiin khibradeyda maahan mid sax ah ama wax laga sameysan karo.
Indhaha: Waa "daaqadda yar" ee aan ku qaabeyno sawirka isla markaana tan waxaan ku arki karnaa waxyaabo ay ka mid yihiin photometer, diaphragm ama goobada diiradda. In kasta oo ay noo tusayso sawirka iyada oo la adeegsanayo muraayadaha indhaha, waxa aan ku aragno waa wax dhab ah oo hage wanaagsan u leh qaadashada sawirradeena. Waxaa jira qodob muhiim ah oo ku saabsan tan waana in la hubiyo in kamaraddeena ay dabool u leedahay muuqaalka. Haddii aan sawirro ka qaadno bilaa iftiin iyo si otomaatig ah, iftiinka ka shaandheeya muraayadda indhaha ayaa wax ka beddeli kara qiimaha oo saameyn taban ku yeelan kara sawirradeena. Ku daboolida kiisaskan waa mid aad muhiim u ah.
Dheelitirka cad: Waa ikhtiyaar muhiim ah si aan ugu soo saari karno midabada sawiradeenna sida ugu dhow uguna macquulsan ee dhabta ah. Haysashada qaabkan oo ah qaabka gacanta ayaa naga caawin doonta wax badan oo ka badan qaabka otomaatiga ah.
Muuqaal Toos ah: Maaha wax aad u muhiim ah, laakiin marwalba way naga caawin kartaa inaan ku aragno waqtiga dhabta ah natiijada qabashadeenu yeelan doonto.
Xiriirinta: Waxa sawir qaadayaasha ugu horumarsan ay badanaa sameeyaan waxay ku xiraan kaamirada shaashad weyn oo banaanka ah ama kumbuyuutarka laftiisa, qaabkan waxaan si dhab ah ugu arki karnaa natiijada tallaalkeenna. Haddii aan isticmaalno qaabkan, waxaa lagugula talinayaa inaad ka isticmaasho softiweer kumbuyuutarkeena kaas oo aan ku xakameyneyno cabirrada kamaradda lafteeda.
Xakamaynta fog: Adoo adeegsanaya badhanka dibedda ama fog, waxaad sawirro ka qaadi kartaa masaafo aad u fog. Kontaroolka fog wuxuu fuliyaa shaqo la mid ah tan saacada, laakiin waa wax aad u raaxo badan waxayna noo ogolaaneysaa inaan xaalada sii xakameyno, waqtiga saxda ah ee aan dooneyno inaan sawirkeena ka qaadno.
Tusaale ahaan, markii aan bilaabay adduunka sawir qaadista waxaan doortay a Nikon D3100 oo waxaan u maleynayaa inay tahay mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee isticmaalayaasha markii ugu horeysay.
Si aad u ogaato midka adiga kugu habboon, waa inaad tixgelisaa dhinacyo kala duwan:
Noocee isticmaale ayaad tahay? Haddii aad tahay xirfadle (ama nus-xirfadle) oo aad la shaqeysid Reflex (iyo qalabyadeeda kala duwan, sida ujeeddooyinka cabbirka madaxaaga) waa inaad maanka ku haysaa in maaddada taageerada laga sameeyay ay aad muhiim u tahay iyo qaab dhismeedka sidoo kale. Waa inuu noqdaa mid adag oo adkaysi leh, laakiin isla markaa firfircoon oo siman, noo oggolaanaya inaan ku dhaqaaqno dhaqdhaqaaqyo hab dhaqso leh iyo gariir ugu yar ee suurtogalka ah.
Shaqo noocee ah ayaad qaban doontaa? Miyaad si joogto ah u dhex mari doontaa muuqaallo kala duwan, magaalooyin iyo goobo ama miyaad qorsheyneysaa inaad sameyso sawir qaadista istuudiyaha? Waxay kuxirantahay qorshaha nolosha ee aad haysato, hal nooc oo maaddo ah ama midkale ayaa adiga kuugufiicnaan doona. Tripods-ka laga sameeyay fiber-ka kaarboonka waa mid aad u badan oo la qaadi karo, la maareyn karo isla markaana dhaq-dhaqaaqa badan (culeyskoodu aad ayuu u yar yahay, in kastoo aysan iska yare iska caabbin) marka haddii aad qorsheyneyso inaad sameysid wado dabiici ah, tusaale ahaan qalabka soo jiidanaaya, waxaa muhiim ah inaad joojiso in laga fikiro tan. Inta udhaxeysa muraayadaha indhaha, kaamerada, safarka iyo alaabada kale, waad ku dhiman kartaa isku dayga. Noocyada kaarboon kaarboonku waxay noqon karaan kuwo khatar ah maxaa yeelay dabaysha dabaysha ah waxay sababi kartaa in walxaha oo dhami ay ku dhacaan dhulka, laakiin taas waxay u leeyihiin nooc jillaab ah oo ku yaal aagga dhexe si ay ugu noqdaan barrooskan xaaladahaas. Si taas looga fogaado, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ka lalmato bac ay ku jiraan dhagxan jillaabkan (waxaad ka qaadan doontaa dhagxaanta goobta aad u socoto, sida muuqata dhagaxyada kuma qaadan doontid boorsadaada guriga;)). Dhanka kale, maskaxda ku hay in aysan isku mid ahayn, safar lagu sawirayo isboorti xad dhaaf ah, aroos ama in la sameeyo filim gaaban waxaa jira naqshado kala duwan. Hal-cag, seddex-cagood, oo leh jihooyin, dhaqdhaqaaqyo taagan… Waxaa ugu wanaagsan in marka hore la fiiriyo buugga guud.
Miisaaniyad noocee ah ayaad haysaa Waxa ugu fiican ayaa ah in haddii aan si dhab ah uga warwareegno adduunka sawir qaadista, yaanan u tegin midda caadiga ah "T0do a 100" oo aan ku iibsanno saddexda caag ee caadiga ah for 5. Jaban waa qaali oo ... xusuusnow in qofna uusan ku siinaynin wax bilaash ah. Haddii safarkaasi uu yahay mid raqiis ah, ma ahan sababta oo ah milkiilaha dukaanka inuu si aan qiimo lahayn kuu siinayo qiimo dhimis, maya, waa sababta oo ah safarkaasi malaha waa sidaas u weyn. Safar xirfadeed wuxuu ku kici karaa qiyaastii € 120.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Qalabka sawir qaadista ee xirfadeed: qalabkee ayaan u baahanahay?